I-Prado isiyengezwe ngohlobo lwe-TX neVX | IOL Isolezwe
I-Prado isiyengezwe ngohlobo lwe-TX neVX
Isolezwe / 14 June 2012, 12:06pm /
UMZIMBA oqinile iLand Cruiser Prado ilungele ukuhamba emigwaqeni emibi okungeke kwahamba kalula noma iyiphi imoto. Uyakhohlwa ukuthi uhamba nge 4x4 uma uhamba nge TX noma i-VX ngoba ziyafana nemoto encane
IMOTO: Toyota Prado
INGQOVUNGQOVU yakwaToyota elungele ukuqwala izintaba nokunqamula amazwe uma uzihambela nomndeni wakho iPrado isithole ukuthuthukiswa ngokuba kwengezwe ezinye izinhlobo ezimbili okuyi-TX ne-VX. Empeleni akuzona izinguquko ezintsha lezi kodwa muva nje umuntu uke wathola ithuba lokuvivinya iPrado emigwaqeni eyifanele. Angimangali ukuthi kungani izinkampani zezimoto zihlale zikhetha ukwethula izimoto zazo koWestern Cape, eKnysna, Eastern Cape nako Magaliesburg kuze kuyoshaya koNorth West bayishiye ngaphandle iKwaZulu-Natal. Imigwaqo yakulesi sifundazwe ayikwazi ukuphonsela imoto inselelo ukuze izibonakalise amandla ayo. Ukuze uvivinye kahle iCruiser udinga umgwaqo ongeke wahamba noma iyiphi imoto.
Phela ama-Land Cruiser SUV adle ngomzimba oyisakhiwo esiqinile ukuze akwazi ukumelana nezimo ezihlukene. Kungalesi sizathu lezi zimoto zikhonzwe kakhulu emazweni asenhla ne-Afrika ngenxa yokubekezela kwazo.
Ukubekezela kwayo sekuholele ekutheni bayethe igama elithi: “Master of Africa” elihumusheka ngokuthi umakhonya e-Afrika.
Onjiniyela bakwaToyota ngesikhathi benikwa umsebenzi wokuhlela le moto badonswa ngendlebe ukuthi uma bezozakha zithi ikuba nkulu kunezangaphambili.
Bekumele baqinisekise futhi ukuthi azibi nkulu ngendlela yokuthi zingabe zisakwazi ukubambelela kahle emgwaqeni futhi kube nzima nokuzilawula njengalezi ezindala. Isithe ukuba banzi futhi yathi ukuwushiya kancane nomhlaba kanti nangaphakathi isinesikhala esivuleke ngokwanele ukwenzela ukuthi namaphasenja athe ukondleka emzimbeni ahlale ngokukhululeka.
Ngakwezokuphepha idlise ngomzimba oqinile kodwa olula kanti le nsimbi eqinile isetshenziswe kakhulu ngaphambili ngasenjinini, iphansi, isemaceleni, ingakubhampa wangemuva bese kuba wukhakhayi.
Kuphinde kwasetshenziswa nohlobo lwensimbi olusetshenzwe ngendlela yokuthi lungaboli kalula.
Lokhu kusetshenziswa komzimba oqinile kwenziwela ukuthi kuvikeleke amaphasenja ayo uma kwenzeka kwehla ingozi.
Kukhona noxhaxha lwama airbag ngaphakathi okuvikela umshayeli namaphasenja akhe kusukela ekhanda kuze kuyoshaya emadolweni.
Ezinye zezinto ezisetshenziswe ngaphakathi ngesikhathi yakhiwa le moto zisebenza ngendlela yokuthi zingabalimazi abangaphakathi uma ibaqazeka imoto noma ishayiseka mawala ngoba zakhiwe zathamba ngisho nasokhakhayini lwayo imoto.
Abagcinanga ngokuqinisekisa ukuthi kuphephe amaphasenja akhona kuphela kodwa babuye baqinisekisa ukuthi nabahamba ngezinyawo abalimali kakhulu uma kwenzeka beshayiswa yile moto.